यस्तो छ भाईटीकाको महिमा, कसरी लगाउने ? « Mero LifeStyle
यस्तो छ भाईटीकाको महिमा, कसरी लगाउने ?
मेरो लाइफस्टाइल	||6November, 2021
कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिमा भाइटीका पर्छ । तिहारको अन्तिम अर्थात यमपञ्चककोे पाँचौ दिन भाईटिका हो । यस दिन दिदीबहिनीले दाजुभाईलाई र दाईभाईले दिदिबहिनीलाई सप्तरंगी टीका, फूल (सयपत्री ÷मखमली) को माला, मिष्ठान्न र एकअर्कालाई उपहार दिएर मनाउने चलन छ । यस पर्वले दाजुभाई र दिदीबहिनीबीचको सम्बन्धलाई दीगो बनाउँछ भन्ने विश्वास छ । यस वर्षको भाइटीकाको साइत कात्तिक २० गते शनिवार बिहान ११ः०२ बजे परेको छ ।
यमराजलाई मन पर्ने जीवजन्तुको पूजाआज गरि यमूनाले दाईलाई खुसी पारेकी थिइन् । बरदानमा कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिमा दाई–भाईलाई टिका लगाउँदा अकालमा मृत्यु नहुने, दुःख कष्ट नपर्नेे, सुस्वास्थ्य र दीर्घायु रहने बरदान प्राप्त गरेको शास्त्रमा उल्लेख छ । सोही कारणले आजको दिन दाजुभाईलाई विधिपूर्वक पूजाअजा गरी सप्तरंगी टीका लगाइन्छ ।
कसरी गर्ने लक्ष्मी पूजा ? यस्तो छ विधि
दाजुभाईले पनि दिदी–बहिनीलाई टीका लगाई दक्षिणा वा उपहार दिने गर्छन् । सप्तरंगी टिका जस्तै जीवनमा खुसीयाली छाउने कामनाका साथ टीका लगाएर खुशी बाँडिन्छ । साथै ढोकामा ओखर फुटाएमा शत्रुले प्रवेश गर्न नसक्ने र दाजुभाईका शत्रु नाश हुने जनविश्वास छ ।
– टीकाको दिन बिहानै स्नान गर्नुपर्छ ।
– सबैभन्दा पहिले दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्नुपर्छ ।
– अष्टचिरञ्जिवी (मार्कण्डेय, व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पर्शुराम, बली, हनुमान, विभिषण) को पूजा गर्नुपर्छ । यी आठ पुरुषको जस्तै दाजुभाई शक्तिशाली बनुन् भनेर पूजा गरिन्छ ।
– पानी र तेलले सात घेरा हालेर दाजुभाईलाई छेक्ने र शीरमा तेल लगाई दिने गरिन्छ ।
– सप्तरंगी टीका लगाउनुपर्छ । यसरी लगाएको टीकाले दाजुभाईको दीर्घायुको कामनाका साथ दाजुभाइप्रतिको प्रेम रंगजस्तै गाढा हुने विश्वास छ ।
– मखमली, सयपत्री फूलको माला एकअर्कालाई लगाई दिनुपर्छ । मखमलीको कहिल्यै नओइलाउने, सयपत्रीको रंग कहिल्यै जाँदैन । जसकारणले यी फूलको प्रयोग गरिन्छ ।
– दाजुभाईको मंगलको कामना गर्दै घरको ढोकामा कसैले ओखर फुटाउने गर्दछन् । ओखर फुटाउँदा दाजुभाईको शत्रु नाश हुने विश्वास छ ।
– कसै–कसैले कडा बोक्रा भएको फल दिँदा अकालमा मुत्यु नहुने, फल जस्तै जीवन कडा भइ राखोस भन्ने पनि हुन्छ ।
– दिदीबहिनीले दाजुभाईलाई ढाकाको टोपी लगाइदिन्छन् । यसले आयु बढाउनुका साथै राष्ट्रियता झल्काउँछ ।
– टीका लगाएपछि उपहार आदान–प्रदान गरिन्छ ।
– यी कार्य सबै सकिएपछि रोटी, मिठो खाने कुरा खाएर मनाइन्छ ।
१७० कुकुरकी अन्नदाता : स्नेहा
सयपत्री सप्रिदा किसान मख्ख : चितवनमा ३५ बिघामा फूलखेती, तिहारलाई साढे दुई लाख माला
भाइटीकाको साइत सार्वजनिक, टिकाको शुभ साइत ११ः०२ बजे
यमपञ्चकका ५ दिन, यस्तो छ महत्व
कलाकारको तिहार योजना, कसको के ?
(प्रा.डा. गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
जीवन साधना – ज्ञान, भक्ति, कर्म र क्रिया योग « Mero LifeStyle